Those responsible for Myanmar crimes could face genocide charges: U.S. – CRM
Posted on September 28, 2018 Author rightsforburma rightsforburma	Comment(0)
NEW YORK (Reuters) – A U.S. government probe into Myanmar’s campaign against the Rohingya Muslim minority was not aimed at determining whether genocide or crimes against humanity had been committed, but those responsible could still be held accountable for those crimes,atop State Department official said on Thursday.
He added: “We are working toward holding those accountable, including judgments like the one you have offered – characterizing it asacrime against humanity or genocide.”
Source : https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1M72VA?__twitter_impression=true
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် နမ်တောင်မြို့နယ် ကောင်းခါးကျေးရွာရှိ ကချင်ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ ချုပ်(KBC) ဝန်း အတွင်း သာသနာပြု လုပ်အားပေး ကျောင်းဆရာမ ၂ ဦး အဓမ္မပြုကျင့် အသတ်ခံရ မှုတွင် တပ်မတော်ကို စွပ်စွဲနေကြ သော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေး ကြည့် သည့်အခါ ကချင် လွတ်မြောက် ရေး တပ်မတော် (KIA)၏ လက်ချက်ဟု တွေ့ရကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောသည်။ မနေ့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်က နေပြည်တော် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင် စီ(PC) တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း […]
Posted on October 27, 2017 Author swelsone
Rohingya refugees fleeing Myanmar have testified thata“consistent, methodical pattern” of killings, torture, rape and arson is taking place, United Nations human rights investigators said on Friday afterafirst mission to Bangladesh. The fact-finding team, led by former Indonesian attorney general Marzuki Darusman, said the death toll from the Myanmar army’s crackdown following […]
Speakers of Convention myanmar's ongoing genocide 2018 rejected Dr Wakker Uddin's Statement
မမြင်ရနိုင်တဲ့ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံစားနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဘ၀တွေထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့ခြင်း
Posted on December 28, 2016 Author rightsforburma rightsforburma